Madaxweyne Farmaajo oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Garowe -
Madaxweyne Farmaajo oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Garowe
Madaxweynaha Dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo Wafdi uu horkacayo ayaa Maanta Gaaray Garowe waxaa halkaas Ku soo dhaweeyay Shacab weynaha Ku nool Garowe.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas iyo qaar ka mid ah Golahiisa Wasiirada,Xildhibaano,Siyaasiyiin,Odayaal dhaqameed Caan ka ah Gobolada Bari iyo Nugaal ayaa Qeeb ka ahaa soo dhaweynta Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo waxaa dhankiisa lasocda Wasiiro,Xildhibaano,siyaasiyiin iyo Saraakiil.
Wafdigaas ayaa caawa waxay ku hooyanayaan Magaala Madaxda Gobolka Nugaal ee Garowe.
Maalinta Beri ah ayaa waxaa lagu wadaa in Madaxweynuhu uu Xarigga ka jaro Garoonka sida Caalamiga ah loo dayactiray ee Garowe islamarkaana Mudo labo sano dhismihiisa uu socday iyo sidoo kale Munaasabada xiligii Cabdi Wali uu ku guulaystay Madaxtanimada Maamulkaas iyo waxa uu qabtayba lagu soo bandhigayo.
Garoonkan ayaa waxaa Maanta markii ugu horaysay Caga dhigatay Diyaaradii Siday Madaxweyne Farmaajo iyo Wafdigiisa.
Shacabka ku nool Garowe ayaa Markii soo caga dhigatay Diyaarada Madaxweynaha Mar qura wada shiday Heeso iskuuga jiray soo dhaweyn iyo Amaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhex lugeeyay Garowe oo shacabkii soo dhaweeyay Salaamay ilaa Madaxtooyada ay ka gaaraan ayuuna salaan iyo lugba ku jiray.
Laga bilaabo Garoonka ilaa Madax tooyada wadada labadeeda dhinac waxaa taagnaa oo saakaba isku diyaariyay shacab aad utiraban.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Mar uu lahadlay Saxaafadda waxaa uu sheegay in ay farxad galisay sida niyad samida leh ee ay u soo dhaweeyeen Shacabka Maamulka Puntland Gaar ahaan kuwa Garowe.
Maalmana uu joogi doono halkaas ayuu sheegay Madaxwrynuhu in uu lakulmi doono dhinacyada Bulshada ay ka koobantahay.
Sidoo kale uu eegi doono Xarumaha waxbarashada iyo Caafimaadka.
Madaxweyne Farmaajo waa Markii ugu horaysay Asagoo Madaxweynaha ah uu ku hoydo Garowe.
Ugu dambeyntii waxaa Aad loo adkeeyay Amaanka Magaaladaas.
Related Items:Featured, Madaxweyne farmaajo oo siheer sare ah loogu soo dhaweeyay Gariwe
Dibadbax Maanta ka dhacay muqdisho
Faa-Faahin ka soo baxday qaraxii ka dhacay Duleedka Muqdisho iyo sargaal ku Geeriyooday qaraxaas
Qarax Sababay Dhimasho iyo Dhaawac oo Ka dhacay Duleedka Muqdisho
Warar Dheeraad ah oo hadda Soo kordhay Sawiro
Mid ka mid ah Abwaanada Soomaaliyeed oo Geeriyooday
Gurmadka Barafka (Snow Emergency) oo Minneapolis iyo St Paul looga dhawaaqay
Safarka Madaxweynaha Soomaaliya iyo Magaalada Hobyo
Taabid oo Eng Yariisow hoygiisa ku booqday Daawo
Dagaal xoogleh oo Galabta Ka dhacay inta udhexeysa Jowhar iyo Balcad
Faa-Faahin ka soo Baxday Dagaal Galabta Ka Dhacay Muqdisho
Shacabka Ku nool Degmada kaaraan ayaa Maanta Dibabax ka dhigay Degmadaas ka dib markii...
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo Safardheer ku maray Deegaanada Maamulada...
Wararka Dheeraadjka ah ee ka soo kordhay Qaraxii Maanta ka dhacay deegaanka KM 13...